Nzira yakanakisa yekunyora tsamba yehunyanzvi zvakanaka
Yakatumirwa ne Tranquillus | Feb 9, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Tsamba yehunyanzvi igwaro rakanyorwa, rinovimbisa hukama hwepamutemo pakati pevakapindirana vakasiyana. Iyo ine yakajairika chimiro chemukati. Chaizvoizvo yakanyorwa pane rimwe peji, kana maviri akasarudzika. Tsamba yehunyanzvi kazhinji ine chidzidzo chimwe chete. Ichi chimiro chemukati chine mukana. Zano rake rekunyora rinogona kuramba rakafanana kunyangwe zvodii. Zviripachena, pachave neshanduko dzakapihwa chinangwa. Nekudaro, chingave chiri nyore chikumbiro cheruzivo, kunyorera, kana kunyunyuta. Iyo hurongwa hwekunyora nyanzvi tsamba ichagara isingachinje.
Zvekare, zvazvino, ramangwana: chirongwa chechikamu-chechitatu chehunyanzvi hwetsamba
Iko kushandiswa kwekare, kwazvino uye kweramangwana, mune ino nhevedzano yekutevedzana, kunoreva hutatu hwechirongwa chekunyora chehunyanzvi tsamba. Iyo iri yakapusa uye inoshanda chirongwa chekushandisa mune ese mamiriro. Kubvunza, kuendesa ruzivo, kutsanangura yakapihwa musoro wenyaya, kana kunyengetedza muverengi wako. Kubudirira, izvo zvinoruramiswa maererano nekurongeka zvine musoro kucherechedzwa muchimiro chayo.
Izvo zvakapfuura: nhanho nhamba 1 yechirongwa
Isu tinonyora tsamba kazhinji, pahwaro hweyakaitika, yekutanga kana yapfuura mamiriro. Inogona kunge iri tsamba yakatambirwa, musangano, kushanya, kubvunzurudzwa parunhare, nezvimwe. Chinangwa chekunyora chikamu chekutanga chetsamba iyi kutaura zvikonzero zvekutumira. Kana chaizvo zvakaperera mamiriro anotsanangura mamiriro acho ezvinhu. Chiyeuchidzo chechokwadi chinowanzo kuratidzwa mumutsara mumwe chete. Nekudaro, zviri nyore kuvaka uyu mutongo mune zvidimbu-mitsara. Nenzira yekuenzanisira, tinogona kuva nemataurirwo anotevera:
Ini ndinobvuma kutambira tsamba yako, uchindiudza nezve ...
Mutsamba yako yakanyorwa ………
Iwe waunza zivo yedu ...
Tichifunga nezvekuburitswa kwako nepepanhau XXX (chirevo n ° 12345), isu tangotsvaga ...
Mushure mekuita ongororo yeaccount yako, takawana ...
Mumamiriro ezvinhu apo chikonzero chekunyora tsamba hachinei neyakaitika chokwadi. Panguva iyoyo isu tine yekutanga ndima yeiyo tsamba uko munyori anozvizivisa iye nekugadzwa kwake. Wobva waenderera nekutsanangudza chikumbiro chako kana nekupa masevhisi ayo akasiyana. Semuenzaniso, mune mamiriro echikumbiro cheruzivo kana chirongwa chebasa, tinogona kunge tine zvirevo zvinotevera:
Savaongorori mubazi rekuchengetedza, tinouya kuburikidza neizvi….
Kuve nekugutsikana kwevatengi vedu pamoyo, isu taida ...
Isu tinofara kwazvo kuzivisa kuti isu takarongera vatengi vedu ...
Muchirevo chechishandiso chinongoitika (internship kana basa), isu tinogona zvakare kuve nemataurirwo pazasi:
Kambani yako yakabata pfungwa dzangu uye semudzidzi mu …………, ndinoda kunyorera yekudzidzira ………
Munguva pfupi yapfuura kudzidza mu ...
Iye anogamuchira kunyorerwa tsamba anofanira, kubva mundima yekutanga, anzwisise musoro wetsamba yako.
Ikozvino: nhanho nhamba yechipiri yehurongwa
Ichi chikamu chechipiri cherongwa chinoreva zvikonzero zvinopembedza kunyorwa kwetsamba panguva T. Nezve mamiriro ezvinhu apfuura akataurwa muchikamu chekutanga. Padanho iri, mubvunzo wekukakavadzana, kuzivisa, kutsanangura, kana kubvunza. Zvichienderana nekuoma kwemamiriro ezvinhu, chikamu ichi chinogona kunyorwa chero mundima izere kana kupa pfungwa huru mumutsara mumwe chete. Nenzira yekuenzanisira, tinogona kuva nemataurirwo anotevera:
Tichicherekedza kuti musi we… invoice n °… haina kujekeswa, isu…
Nhengo dzesangano redu zvakare dzinokuvimbisa ...
Kunyangwe hazvo chibvumirano chinopa kutanga kwebasa pazuva ra…, tinoona nekushamisika uye takanetseka kunzwisisa kunonoka kwakataurwa naVa ……….
Iyo ramangwana: nhanho nhamba 3 yeurongwa
Ichi chikamu chechitatu uye chekupedzisira chinovhara maviri ekutanga nekuzivisa pamusoro nemigumisiro kuuya kumusoro.
Chero isu tinoratidza zvinangwa zvedu, semunyori wetsamba, uye tinogona kushandisa zvimiro zverudzi.
Nhasi ini pachangu ndichatarisira kutumira zvinhu zvawakumbira
Isu takagadzirira kutsiva ... tichifunga nezvechokwadi chepakutanga.
Ndokumbira uswedere padyo nehofisi yetikiti… ..
Chero isu tinoratidzira chishuwo, tichikumbira kana kukurudzira iye anogamuchira kuti aite kana kuita. Isu tinogona saka kuve neanotevera mafomati:
Unokokwa kuti uuye padhuze nekaunda
Naizvozvo ndinokukumbira kuti udane varidzi vako nekukurumidza kuti ...
Kukurumidza kwako kugadzirisa mamiriro ezvinhu aya kwakamirirwa nechido.
Chinangwa chekunyora tsamba iyi chinogona kuperekedzwa nenharo:
Iwe unozogadzirisa mamiriro acho nekukurumidza sezvazvinogona (chinangwa) zvinoenderana neyakajairwa uye yakatarwa mvumo yechibvumirano. (Nharo)
Unogona here kuronga kuendesa kwangu nekukurumidza sezvazvinogona ? (Chinangwa) Hazvibatsiri kukuyeuchidza kuti iko kuendesa kunofanirwa kuitwa pazuva rakatarwa, nekuda kwemamiriro ako ekutengesa. (Kupokana)
Fomula inehunhu, yakakosha kuvhara tsamba yako yehunyanzvi !
Kuti ugumise zvakanaka tsamba yehunyanzvi, zvakakosha kuti unyore chirevo chine mutsigo. Icho chiri muchokwadi chimiro chakapfava zvakapetwa kaviri, chinosanganisira chirevo, asi zvakare che "pre-mhedziso" fomula
VERENGA Mhando yepamusoro yekuremekedza maemail ako
Pamwe isu tine nzira yekuremekedza, inoratidza humwe hushamwari:
Gamuchira pamberi pekutenda kwedu kwe ...
Tinokumbira ruregerero nekuda kwemamiriro ezvinhu asingatarisirwi
Ini ndichagara ndichiwanika kuti ndikurukure izvi mumusangano
Unogona kutirovera chero nguva ku ...
Isu tinovimba kuti ichi chikumbiro chichasangana nezvamunotarisira uye isu tiri vechokwadi muripo kuti muwane rumwe ruzivo.
Pamwe isu tine ruremekedzo fomula:
Tinokukumbira kuti ugamuchire, Madam, Changamire, zvido zvedu zvakanaka.
Ndokumbirawo utende, Changamire, mukutaura kwemanzwiro edu akanaka.
Ndokumbirawo mugamuchire, Madam, edu akanaka kwazvo.
Kubatsira kwechirongwa ichi mukunyora tsamba yehunyanzvi kune rumwe rutivi kugona kwayo mukunyora zvirimo uye kune rimwe divi, kuve nyore kwayo kuverenga uchienda kune unogamuchira. Nekudaro, uyu mutsara wenguva hauna kukurudzirwa kune zvimwe zvakaoma uye zvakareba zvemukati
Nzira yakanakisa yekunyora tsamba yehunyanzvi zvakanaka Kukadzi 9, 2021Tranquillus
pashureKubhadhara uye chikamu chikamu chebasa
zvinoteveraKukadzi 9, 2021 Kubatanidza shanduko: chishandiso chitsva chekufambisa kwehunyanzvi Transco chishandiso chinopa kudzidziswa kwevashandi mukudzidzirazve kukudziridza zvikamu zvezviitiko, kana ivo vachishandiswa muzvikamu mune kuderera kwehupfumi.
Tsamba template kubvuma kana kuramba chiyero kubva kune chero account
Ita Voltaire Project Inokuendesa Kumhanzi Yakakurumbira yeOrgraph